NEZVEDU - Xuzhou Sogood International Trading Co Ltd.
Sezvo kambani ine-yakazara, Isu tinopa akasiyana siyana egirazi midziyo, sekutarisirwa pachedu, zvigadzirwa, mafuta anonhuwirira, salon uye spa, chikafu uye chinwiwa, mishonga yekurapa neyeimba makemikari chigadzirwa kurongedza, kune ese emakambani uye emunharaunda makambani, kune yakaenzana dzakasiyana siyana dzekupedzisira dzinoshandisa.
Kwemakore gumi apfuura yakakura kuva nyanzvi yekugadzira uye indasitiri mutungamiri.
Fekitari yedu ine 36 otomatiki kugadzirwa mitsara, 70 manyore kugadzirwa mutsetse, inogadzira anopfuura mamirioni 2,8 marudzi ese egirazi zvigadzirwa pazuva. Tine vashandi vanopfuura mazana mashanu, kusanganisira makumi maviri nevasere vashandi vane hunyanzvi, hwekutarisisa hunyanzvi hwevashandi gumi nevaviri. Hunhu hwechigadzirwa chedu huri kuve wakanyatso komeswa uye danga richidzorwa
Sezvo a mubereki kambani , fekitari yedu yakavambwa mukati 2009 , iyo yakatsaurwa mumusika pamwe nekune dzimwe nyika musika uye yakakura kuva yakakura kugadzirwa fekitori mu Jiangsu mudunhu.
Tichifunga nezvekunze kwemusika kuri kuwedzera kutenga kunoda, isu takamisa dhipatimendi rekudyara nekutengesa mukati 2019 , Xuzhou Sogood International Trading Co Ltd , iyo yaiita mukusimudzira zvigadzirwa, kusimudzira hunyanzvi uye kuwirirana kwezvinhu zvinotengesa kunze kwenyika.
Nemakore anopfuura gumi eruzivo rwepamberi mukushambadzira uye kunaka kudzora, kuve nemawadhi emawadhi anodarika zviuru zviviri muXuzhou, iyo inobata mamirioni ezvigadzirwa zviripo, inosangana zvakakwana nezvinodiwa nevatengesi.